IMacOS ePhakamileyo yeSierra isivumela ukuba siqwalasele ukuba sabelana ngolwazi ngeApple ukuphucula inkqubo | Ndisuka mac
IMacOS ePhakamileyo yeSierra isivumela ukuba siqwalasele ukuba sabelana ngolwazi ngeApple yokuphucula inkqubo
Sikhuphe ingxelo yokugqibela ye-MacOS High Sierra ukusukela izolo, ngeendaba ezininzi kunokuba ubungalindela ekuqaleni. Kancinci kancinci safumanisa imisebenzi emitsha okanye efihlakeleyo esingakhange sikwazi ukufikelela kuyo kulwazi olunikezwe yiApple kwiwebhusayithi yayo. Kodwa ayisiyiyo yonke into ephuculweyo yomsebenzisi, iApple ifuna ukuqokelela idatha yokuphucula ulwazi okanye ingxelo evela kubaphuhlisi, kodwa nakwezayo umdla. Eli nyathelo alifanelanga ukuba libi ukuba lilawulwa kakuhle, enyanisweni into efanayo yenziwa kunyaka ophelileyo nge-iOS 10. Ngale nto, inomdla wokuphucula ngokuqhubekayo iinkonzo kunye nokusetyenziswa.
Nangona kunjalo, ingenzeka njani enye into, sinokukhetha ukuba sifuna ukwabelana ngolwazi lwethu no-Apple, ngaphandle kwenkampani iqinisekisa ukuba "kuthutho" lolwazi, iApple isebenzisa ingxolo ethile eyenza ukuba ulwazi lwethu lungafundeki de lufike kwiiseva zenkampani. .
Owona mthombo uphambili wolwazi ngu-Safari. Oku akwenzi ngathi uyazi ukuba leliphi iphepha elaziwa kakhulu kwicandelo elithile. Endaweni yoko, ewe yintoni unomdla wokwazi ukuba ngawaphi amaphepha aneengxaki, kwelinye icala, ngokunxulumene nentengiso, kodwa ngakumbi kwezo ukuvelisa ukungasebenzi kakuhle kwisikhangeli okanye usetyenziso. Kuxhomekeke kwingxaki ekuthethwa ngayo, yazisa amanyathelo athile kuhlaziyo lwexesha elizayo.
Kwelinye icala, xa sifaka okanye sihlaziya inkqubo yethu yokusebenza, iApple iyasibuza ukuba sifuna ukwabelana ngolwazi ukuphucula usetyenziso. Ngoku siza kubona indlela yokuguqula ezi paramitha kwi-MacOS ePhakamileyo yeSierra. Yayo:
Kufuneka singene kwi-PrIzikhombisi zenkqubo.
Khangela kwaye ucofe ku Ukhuseleko nemfihlo.
Kwicala lasekhohlo, siza kubona kukhetho lokugqibela: Uhlalutyo. Sinqakraza kuyo.
Ngoku, kwicala lasekunene, siza kubona iindlela ezintathu zokwabelana ngolwazi: Yabelana nge-Mac analytics, yabelana nabaphuhlisi be-App, yabelana nge-iCloud analytics.
Ukuba sibona ukhetho lukhubazekile, njengakwisiqalo, cinezela ukuvala ezantsi ekhohlo kwaye uvule. Eli nqanaba leenkcukacha lulutsha lweMacOS ePhakamileyo yeSierra, esivumela ukuba sikhethe ukuba loluphi ulwazi esifuna ukwabelana ngalo kwaye yintoni esingayiyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » IMacOS ePhakamileyo yeSierra isivumela ukuba siqwalasele ukuba sabelana ngolwazi ngeApple yokuphucula inkqubo